Fayrusta koroonada – macluumaad ku qoran af-soomaali - Universitetssykehuset Nord-Norge
Fayrusta koroonada – macluumaad ku qoran af-soomaali
Ku socota bukaanka, ehelkooda iyo dadka soo booqda
Haddii aad xanuunsanaysid, oo aad u baahantahay caawimo caafimaad, marka hore la xidhiidh dhakhtarkaaga ama cisbitaalka degdegga oo telefoonkiisu yahay 116 117. Sidaa samee haddii aad qabtid xanuunka koroonada ama xanuun ah nooce kaleba. Telefoonka 113 ee gargaarka caafimaad ee degdegga ah waxa la isticmaalayaa keliya marka uu jiro xanuun degdeg ah oo nafta ku khatar ah ama dhaawac jidheed.
Macluumaad ku saabsan fayrusta koroonada waxaad ka helaysaa bogga internetka ee Machadka Caafimaadka Dadweynaha (dhowr af)
Su'aalo iyo jawaabo ku saabsan fayrusta koroonada oo ku qoran afaf kale waxaad ka helaysaa halkan (dhowr af)
Bukaanka balan caadi ah ku leh cisbitaal
Koroonada dilaacday darteed waxa lagama maarmaan noqotay in aanu dib u dhigno qaar ka mid ah qalliino iyo balamo mudaysnaa. Haddii dib loo dhigay qaliinkaaga ama balantaada waxa kula soo xidhiidhi doona cid ka tirsan cisbitaalka.
Haddii aad wax war ah naga maqal, kaalay wakhtigii lagu balamiyey, haddii aanad qabin xanuun ama aad ku jirin karantiimo/gooni-u-bax. Markaas oo kale telefoonka ka wac cisbitaalka, oo ka samayso balan cusub.
Haddii aanad hubin in aad tegi kartid ama ay haboontahay inaad tagtid cisbitaalka, kala xidhiidh telefoonka. Telefoonka qaybta cisbitaalka ee ku khusaysa waxaad ka helaysaa warqadda laguugu yeedhay, ama https://unn.no/avdelinger
Waxannu cisbitaallada u kala qaybinay sooneyaal kala saaraya bukaanka koroonada iyo bukaanka kale. Taas darteed ma u dhawaan doontid bukaan u jiifa covid-19 marka aad timaadid cisbitaalka.
Marka aad joogtid cisbitaalka gudahiisa waxannu kaa codsan doonnaa ilaalinta nadaafadda gacmaha. Waxannu rabnaa inaad is-diiwaangelisid kadibna toos u aadid goobta balanta. In wacan ka fogow bukaanka kale, isla markaana yaree dhex socodka cisbitaalka. Marka balantaadu dhammaato waxa wacan inaad toos u baxdid.
Ehelka raba in ay soo booqdaan bukaanka
Si looga hortago faafitaanka fayrusta koroonada, ma ogolaan karno in tirada soo-booqdayaashu ahaato sidii xilligii ka horeeyey dilaaca koroonada.
Haddii aad rabtid inaad soo booqatid qof aad u buka, telefoonka kala xidhiidh qaybta cisbitaalka ee ku khuseysa si aad ula balantid.
Cisbitaalku mararka qaar wuxuu ogolaan karaa in la iska arko fiidyow haddii xaalada qofka bukaanka ah saamaxayso, oo ay jiraan ehel badan oo raba inay la xidhiidhaan qofkaas.
Wehelka ama ehelka looma ogola inay soo galaan cisbitaalka haddii ay bukaan ama ku jiraan karantiimo/gooni-u-bax.
Haweenka xaamilada ah/uurka leh
Qof kasta oo la soo xidhiidha qaybaha dhalmada waxa la weydiin doonaa su'aalo ku saabsan qaaditaanka koroonada iyo xanuunka ka yimaada koroonada. Haddii aad qabtid xanuun ama ay u badantahay inaad qabtid, waxa aad umulisada ka heli doontaa tilmaamo ku saabsan gaadiidka aad soo raacaysid, imaanshaha iyo joogitaanka qaybta dhalmada.
Haweenka ilmaha dhalaysa waxa xilliga dhalmada la joogi kara hal ku-lamaane ah oo caafimaad qaba.